Dowladda Afghanistan oo sii daysay maxaabiis Taalibaan ah | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Dowladda Afghanistan oo sii daysay maxaabiis Taalibaan ah
Kapul- (SONNA)-Madaxwaynaha Afqhanistan Asharaf Qaani ayaa sheegay in ay oodda ka qaadeen 1500, maxaabiis Taalibaan ah, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in Taalibaanna ay dhankooda sii dayn doonaan maxaabiista ay hayaan.
Sii daynta maxaabiistan ayaa timid kaddib markii dhawaan dowladda Mareykanka ay heshiis la gashay kooxda Taalibaan ee ka dagaallanka dalkaasi, waxaana dowladda Mareykanku durba billoowday in kumanaan ciidamadeeda ah ay kala baxdo dalkaasi.
Heshiiska ay kala saxiixdeen Taalibaan iyo Mareykanka qayb kama ahayn dowladda Afghanistan, iyadoo Taalibaan ay ku hanjabtay in ay sii wadi doonaan dagaallada ay kula jiraan ciidamada dowladda Afghanistan.
Muddo 18sano ah ayaa dagaallo ka socdeen Afghanistan, kuwaasi oo ka danbeeyay weerarkii argagixiso 11kii Sptember, wuxuuna maraykanku xilligaasi ku eedeeyay talibaan in ay Magangalyo siisay hoggaankii Alqaacida.
Previous articleWasiirka caafimaadka Dalka Ingiriiska oo laga helay xanuunka Coronavirus
Next articleGuddoomiyaha Hiiraan oo safar shaqo ku tagay degmada Buula-barde